Faly Ramakavelo : Tsy raharaham-pirenena ny raharaha Claudine Razaimamonjy -
AccueilRaharaham-pirenenaFaly Ramakavelo : Tsy raharaham-pirenena ny raharaha Claudine Razaimamonjy
Faly Ramakavelo : Tsy raharaham-pirenena ny raharaha Claudine Razaimamonjy
19/04/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy tokony hatao resa-be ary tsy tokony ho raharaham-pirenena ny momba ilay mpandraharaha izay maresaka ankehitriny hoy i Faly Ramakavelo izay mpahay toe-karena. Ho azy mantsy dia fanodinkodinana saim-bahoaka izao zava-mitranga izao, ka very anjavony ny tokony ho tena adihevitra. Dia ny momba ny fiainam-bahoaka indrindra ny ara-toe-karena. Vary, famoronan’asa, tsy fandriam-pahalemana izay misy mamboly, fametrahana amin’ny toerany ny sandam-bola malagasy , ireo izao no tokony hiompanan’ny adihevitra. Noho izany dia zary lany andro, mivoana amin’ny tokony ho izy ny adihevitra. Mikasika io fanazavana sy fanehoan-kevitra noentin’i Faly Ramakavelo io ihany dia nomarihiny fa anjaran’ny fitsarana io raharaha io, ary tokony hajain’ny rehetra izany. Izany hoe tahaka ny raharaham-pitsarana rehetra, dia tsy tokony hisy ny faneriterena amin’ny fanehon-kevitra an-gazety, na ihany koa amin’ny alalan’ny tambazotran-tserasera. Izany mantsy dia mitarika ireo vahoaka hisaina amin’ny mety tsy hahasoa azy ireo akory.
Nanamarika i Faly Ramakavelo nandritra ny fanehoan-keviny, fa raha toa lasa resa-be tahaka izao ny raharam-pitsarana iray, dia tokony havoaka avokoa ny raharaha nahitana fanodinkodinana niseho teto amin’ny firenena. Fantatra mantsy ny anaran’ireo olona ireo, ka tokony hiroso amin’izany ny Bianco. Raha toa kosa ka tsy izay no zava-mitranga hoy i Faly Ramakavelo dia tokony ny mahasoa ny vahoaka no atao anton-dresaka. Ohatra amin’izany ny fampirisihana ireo malagasy mpandraharaha, hampiditra vola vahiny maro eto Madagasikara mba hahamarin-toerana ny vola malagasy. Rehefa izay no tanteraka hoy i Faly Ramakavelo dia ahazo aina ny vahoaka malagasy eo amin’ny fitadiavana ny sakafo haniny sy izay mba ahatsara ny toe-piainany
Fanirisoa Ernaivo : Tsy tokony ho Mpitsara intsony
Vao nanomboka nanao ireny fihetsika nampametra-panontaniana ny maro ireny ny filohan’ny SMM, Fanirisoa Ernaivo dia efa nanambara ny teto amin’ny gazety fa misy ambadika politika, ary misy famatsiam-bola avy amin’ny fanoherana aorian’ity Mpitsara iray ity. ...Tohiny
Fampandrosoana ny firenena : Lohalaharana amin’ny fandraisana andraikitra ny Kristianina
Fanondranana « bois de rose » 1000 kaontenera : Mitodika any amin’ny Bianco
Praiminisitra Mahafaly Olivier : Efa mandray andraikitra ny fanjakana
http://gi30.org/nceh2018/forums/index.php?action=profile;u=1366: We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Yourr web site offered us…